I-Titleist Pro Titanium 905 Abaqhubi: I-905T ne-905S
Abaqhubi be-headist 905 beyona iklasi yegalufu kakhulu-ngegolfu ekupheleni kuka-2004 / ekuqaleni kuka-2005 kwihlabathi legalufa. Olu chungechunge luqale luquka imodeli emibini, umqhubi we-Titleist 905T kunye nomqhubi we-905S. Kwakukho ngo-Apreli ka-2005 ukuba i-amateur kunye negolati yokuzonwabisa baqala ukubukeka kwabo. Inqaku elilandelayo libukeka kwangoko kwi-Drivers Series 905, eyapapashwa ngo-Matshi, 28, 2005.
Abaqhubi beCandelo le-905 abaqhubi ekugqibeleni bafika, balandela i-Buildup ye-Buzz
Kukho isakhiwo se-buzz ejikeleze abaqhubi abavela kwisizukulwana esivela kwi-Titleist-inkampani ye-905 Series - ukususela ngo-2004 emva kokuba i-prototypes iqale ukubonisa ukuvakasha.
Ekuqaleni kuka-2005, u- Ernie Els wathintela umdla wabaphulaphuli xa uthetha ngomqhubi we-905 owawudlala. U-El wayekhalaza ngesandi sakhe esenziwe ngempembelelo, kodwa wathi wayenxibe iimfumba zee-earplugs ukuba wayenayo kuba bekude.
Emva koko umntu othe wathengiswa kwi-eBay enye yee-prototype ze-905 zee-prototypes, kwaye yafunyanwa ngaphezu kwama-2,000.
Ngoku, u-Titleist ulungele ukuvula ngokusemthethweni i-Titleist Pro Titanium 905 Series Drivers. Abaqhubi ababini - i-905T ne-905S-baqala ukuthunyelwa kwiivenkile zeprogram ngo-Ephreli 1, 2005, kwaye bathathe intengiso ephakanyisiweyo ye-$ 500.
Abaqhubi be-975 Seriesist baqala ngo-1997 kwaye balandelwa ngu-983 Series. Ngoku, i-905 Series ithatha i-Titleist kunye nabalandeli bayo phakathi kwegalufu ephezulu ukuya kwisinyathelo esilandelayo.
"Ukuqaliswa kweziqhubi ezintsha ze-Pro Titanium 905T kunye ne-905S kwenza i-Titleist ukuba ifaneleke ukulungelelanisa i-golfer enzulu ngokuphucula ukuphucula, iimpawu ze-spin kunye nezindiza," watsho uChris McGinley, oyiNtloko ngongameli, uMlawuli weCandelo leGalati yeNtengiso yeGolf kwihlabathi lonke.
"Abaqhubi abatsha aba-905 bavumela abadlali ukuba banyuse i-angle yabo yokuqala xa benciphisa ukujikeleza, kubangele ukuhamba kwebhola kunye nokunyuka kwamanzi."
Iinkalo zobugcisa beeklabhu zenzelwe, phakathi kwezinye izinto, ukunciphisa ubukhulu bendawo . Akumangalisi apho. Kodwa phakathi kweendlela u-Titleist ufezekisa ngayo ngoku kususa ubunzima ukusuka kwindawo ye- hoster kwaye ubeka kwakhona kwakhona ngeemilinganiselo zemizimba yangaphakathi.
Inkalo ye-beta ye-betan ifakwe kwinqanaba le-plasma welding processist ethi i-Titleist ithi iyakususa i-weld impahla ebusweni, idibanise neenzuzo zokusasazeka kwenani lonke. I-coefficient of restitution kwi-905T kunye ne-905S yokuqhuba ibanga liphezulu, ngelixa i-Titleist ithi ivelisa isivinini sebhola esiphezulu kuneziqhubi ze-983 Series.
I-Distributor ye-Metalwood Design and Development i-Distribution of weighting in the pro Titanium 905. "Le nto ikhiqiza i-angle engaphezulu yokuqalisa kunye ne-spin ephantsi yokunyuka kwendawo kunye neyona ndawo inkulu. ukutyelela kuthetha umgama kunye ne-flatter, elawulwa kakhulu. "
Abaqhubi ababini kwi-Titleist Pro Titanium 905 Series, i-905T ne-905S, banikezela ngeenjongo ezahlukeneyo zegolfu ezineemfuno ezahlukileyo.
Umqhubi we-Titleist Pro Titanium 905T ngu-400cc. Iqukethe iphrofayli enkulu ebusweni-phambili, kodwa ubuso obuncinci ngaphezu kwe-905S.
Isihloko sithi i-905T "ijoliswe kuzo zonke iigolisa ezibucayi, kubadlali bezhenketho kubagolisa abanomdla." I-905T inikeza i-angle yokuqala yokuqala kunye neempawu eziphambili eziphantsi. "I-905T yenzelwe ukuvelisa umzila ophezulu wokuqalisa ukuhamba, kunye nexesha elide, ukuhamba ngokukhawuleza, kwaye kujoliswe kuzo zonke iigolfu ezibucayi ezifuna umqhubi ophezulu osebenzayo," utsho iNcwadi.
Umqhubi we-Titleist Pro Titanium 905S u-400cc. Iqukethe umzobo obunzulu obusweni kunye neprofayili engacacanga kunye neyinkimbinkimbi phambi kwe-905T. Isiko sobungcipheko sisondele ebusweni kwi-905S, ukukunceda ukuvelisa ukuqaliswa kokuqala. Ukunciphisa ukucoca kunye nokuqulunqwa kwamacwecwe "kwenza iPatanium 905S ibe yinto efanelekileyo kwiqonga eliphezulu okanye abadlali abaphezulu abafuna ukunyanzeliswa kwempumelelo."
Izinketho ezininzi ze-shaft zikhoyo kubaqhubi be-905 Series. Ubude bomgangatho ngamnye buyi-intshi ezingama-45 kunye nomgangatho oqhelekileyo kwiCandelo leVicvet Velvet. I-Loft ye-905T ifaka i-7.5, 8.5, 9.5, 10.5 kunye ne-11.5 kunye ne-8.5, 9.5 no-10.5. I-Lofts ye-905S ifaka i-7.5, 8.5, 9.5 kunye ne-10.5 kunye ne-8.5, 9.5 no-10.5.
Iingelosi zithandaza: Ukuthandazela ku-Archangel Ariel
Ixesha elikhoyo leeVenzi
Ukutshata komntwana: Amaqiniso, izizathu kunye neziphumo
Iilwimi zesiTaliyane: I-Praticare
Indlela yokusebenzisa iiKriketi ukubala Ukushisa
Ukumisa kunye nabalingiswa kuMthetho ezimbini ze-Play "Clybourne Park"